G/Sare Koofi “Waxaan rabnaa inaan diiwaangelino dhammaan ajaanibta dalka joogta ama martida ah” – Balcad.com Teyteyleey
G/Sare Koofi “Waxaan rabnaa inaan diiwaangelino dhammaan ajaanibta dalka joogta ama martida ah”
G/sare Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi) Agaasimaha Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya oo ka qeyb-galayay maanta barnaamijka kulanka Toddobaadka ee Warbaahinta Qaranka ayaa sharraxaad ka bixiyey shaciga socdaalka Soomaaliya oo dhowaan wadatashiyo arrimahaas ku aaddan laga bilaabay Muqdisho, isagoo sheegay in wadatashiyada la gaarsiinayo gobolada dalka.
G/Sare Koofi ayaa sheegay in hey’addu ay hirgelisay xafiisyada Jubbooyinka iyo Gedo oo ilaalinta doona dhinac Xuduudaha, iyagoo la shaqeynaya Hey’adaha amniga dalka.
Agaasimaha Hey’adda Socdaalka ayaa soo hadal qaadey horumarka Baasaboorka Soomaaliga ah, waxa uu carrabka ku adkeeyey in caalamka oo dhan uu ka shaqeeyo, hasa ahaatee loo baahan yahay in Soomaaliya ay wadamo adduunka la gasho heshiisyo socdaal, si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ugu fududaato dalka ku galka ama VIISA-ha.
Agaasimaha Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ayaa sheegay in Dowladda Mareykanka ay kala hadleen arrimaha Socdaalka, welina ay wada hadallo u socdaan, xayiraadda Mareykanka toddobada dal uu ku soo rogayna aysan la xiriirin Baasaboorka ee ay tahay arrimaha Socdaalka dedaalkeeduna ay wadaan.
Dhanka kale ugu dambeyntii Agaasimaha Hey’adda Socdaalka Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi) ayaa ka hadlay waxa ay hey’addu hiigsaneyso mustaqbalka dhow.
The post G/Sare Koofi “Waxaan rabnaa inaan diiwaangelino dhammaan ajaanibta dalka joogta ama martida ah” appeared first on Ilwareed Online.
Ciidamada Dowladda oo Dib ula Wareegay Deegaanka Bariire ee G/Sh/|Hoose
Kulan looga hadlayay sare u qaadida ammaanka oo dhexmay Amisom iyo Duqa magaalada Muqdisho